Macallinka Man United ee Ole Gunnar Solskjaer oo ka hadlay xaaladda Shaw, Lindelof, Pogba, Bailly & Cavani ka hor kulankooda caawa ee Burnley – Gool FM
(Manchester) 12 Jan 2021. Macallinka Kooxda Manchester United ee Ole Gunnar Solskjaer ayaa ka hadlay xaaladda ay ku sugan yihiin Shaw, Lindelof, Pogba, Bailly iyo Cavani ka hor kulankooda caawa ay la leeyihiin Burnley ee horyaalka Premier League.
“Dhammaantood tababarka waa ay qaateen” ayuu yiri Solskjaer oo ka hadlayey xaaladda Pogba, Shaw, Lindelof iyo Bailly.
“Paul iyo Eric kaliya ma aysan wada sameynin tartarka oo dhan, laakiin Luke iyo Victor ayaa dhammaan sameeyay.”
Tababaraha Man United ayaa intaa ku daray: “Waxaan haystaa ciyaartoy macquul ah oo aan ka soo xusho shaxdeyda marka aan aragno sida ay yihiin Paul iyo Eric berri (Maanta).”
“Edinson si wanaagsan ayuu tababarka u qaatay markii la ganaaxay, wuxuu haystay dhowr maalmood oo fasax ah, dabcan, sidoo kale – tababar badan ma sameyn kartid.
“Laakiin diyaar ayuu u yahay inuu naraaco, wuxuu na siiyaa dookhyo ka duwan kuwii hore, waa weeraryahan kale maadaama aan haysannay weeraryahanno kala duwan sida Mason (Greenwood), Anthony (Martial) iyo Marcus (Rashford), marka waan ku faraxsanahay inaan dib u helay isaga taasi waa sababta aan u keennay.”
Mesut Ozil oo shaaciyey SHAXDA 11-kii ciyaaryahan ee ugu wanaagsanaa oo uu ka garab ciyaaray intii uu joogay kooxda Arsenal